Hlola i-Kizhi, i-Russia - World Tourism Portal
Hlola iKizhi, Russia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeKizhi
Bukela ividiyo ekhuluma ngoKizhi
Hlola i-Kizhi, isiqhingi saseKarelia, Russia. Umnyuziyamu we-KIZHI ungenye yeminyuziyamu evulekile enkulu kunazo zonke eRussia. Lokhu kuyingqayizivele eyingqophamlando yomlando, isiko nemvelo ebhalwe kwiKhodi YamaSiko Aqakatheke Kakhulu Wamasiko Wabantu Base Russian Federation. Isisekelo sokuqoqwa komnyuziyamu ukwakhiwa kweKizhi Pogost yezakhiwo kufakwe kuLuhlu Lwamagugu Omhlaba lwe-UNESCO.
UMnyuziyamu "Kizhi" Museum utholakala esiqhingini saseKizhi eLake Onega, e68 km. ibanga ukusuka ePetrozavodsk, inhloko-dolobha yaseRiphabhlikhi yaseKarelia. Imnyuziyamu ibicwaninga, igcina futhi ivumela amasiko abantu bomdabu baseKarelia iminyaka engaphezu kwe-40.
Ukuqoqwa kwe-Open-Air "Kizhi" Museum kufaka isikhumbuzo se-89 sokwakhiwa kwamapulangwe: izindlu zakudala nezindlu, amakamelo omoya nezinqolobane, isibuya sokubhula kanye nama-racks okutshala izitshalo ... Amagugu aleli qoqo yiBandla le-22 elibuswa ukuguqulwa kwamaNtu Msindisi, ukuphakama kwamamitha we-37. ISonto le-Intercession of Holy Mary kanye neBell-tower eliseduzane ligcizelela ukuvumelana nobukhulu beBandla eliphambili.
Izivakashi zemnyuziyamu zingavakashela iSonto le-Intercession le-Holy Mary namakhaya abantu abancane. Imisebenzi yezandla yendabuko iyakhonjiswa ezindlini zabantu abampofu; umoya uyageleza ukhala phezu kwesiqhingi. Ukusebenza okumangalisayo kwe-Museum fk ensemble kunezela imibono yesiko labaphilayo bendabuko. Izivakashi ezihlala kulesi siqhingi zivumelana nomunye wemikhosi yeMnyuziyamu zizoba nemiphumela ehlala njalo.
I-Kizhi Pogost Ensemble yabhaliswa kuLuhlu Lwamagugu Emhlaba lwe-UNESCO e1990. Ku-1993 ngesinqumo soMongameli weRussian Federation iqoqo laseMnyuziyamu waseKizhi lafakwa kwiKhodi Yezwe Yamasiko Wamasiko Aamagugu Akhethekile weRussian Federation.
Ukusuka kuJun kuya ku-Aug, iHydrofoils yenza i-75min ihambe kathathu ngosuku ukusuka kwisikebhe sikaPetrozavodsk. Izikhathi zokusuka nokubuya zingatholakala kuwebhusayithi yeTourholding Kerelia (kodwa kungenile Russian)